Fampandrosoana : misedra olana amin’ny lalana sy herinaratra ny faritra Boeny | NewsMada
Fampandrosoana : misedra olana amin’ny lalana sy herinaratra ny faritra Boeny
Itoviana amin’ny faritra hafa koa ny olana any amin’ny faritra Boeny. Na izany aza anefa, samy manao ezaka amin’ny fampandrosoana ny mpitantana. Tafaresaka amin’ny gazety Taratra ny lehiben’ny faritra Boeny, maneho izany rehetra izany.
“Anisan’ny sakana amin’ny fampandrosoana aty aminay ny faharatsian’ny lalana. Tsy tafavoaka ny vokatry ny tantsaha. Ohatra ny any Ambato-Boeny sy Mahajanga II hatrany Mitsinjo. Voatery taterina amin’ny sambo na sarety na lakana izany”, hoy ny lehiben’ny faritra Boeny, Saïd Ahamad Jaffar, tamin’ny resaka nifanaovana tamin’ny tao amin’ny birao fiasany ao Mahajanga ny herinandro teo. Manampy ireo ny seranan-tsambo eo an-toerana, tokony ahafahana manondrana entana. Kely sy efa antitra sady tototry ny fasika, araka ny nambarany.
Anisan’ny olana goavana koa anefa, ny halafon’ny vidin’ny herinaratra. “Niainana efa hatramin’ny fotoana maro izany ary mampandositra ny mpampiasa vola. Ohatra, nahatonga ny fikatonan’ny Sotema”, hoy ihany izy.
Na izany aza, nambarany fa efa misy ny fijeren’ny fanjakana ny olana sasany, toy ny fanamboarana ny tetezan’i Kamoro sy ny ho fiaraha-miasa amin’i Afrika Atsimo, hanarenana ny seranan-tsambo mba hahazaka tena toy ny any Toamasina koa.
Momba ny fiaraha-miasa amin’ireo ben’ny Tanàna, nambarany fa mitondra ny anjara birikiny ny faritra. Eo ohatra ny fanofanana azy ireo momba ny fanjakana tsara tantana. Ny fanomezana torolalana samihafa ho an’ny fampandrosoana.
Ho kandidà raha mahazo tsodranon’ny filoha
Ankoatra izany, eo ny fiaraha-miasan’ny faritra amin’ny sehatra tsy miankina tafiditra amin’ny 3P. Ny fanohanana ny tontolo ambanivohitra. “Manana ny maha izy azy amin’ny fambolem-bary ny any Marovoay. Ny fanondranana any ivelany ny voamaina lojy. Ny famokarana fary sy ny fananana ozinina manodina alikaola sy siramamy…”, hoy ny lehiben’ny faritra.
Eo koa ny fanatsarana ny tontolo iainana sy ny fizahantany ary ny ady atao amin’ny tsy fananana asa, hiarahana amin’ny BIT .
Ny lafiny politika indray kosa, nambarany fa efa misy miomana amin’ny fifidianam-paritra ireo mpanao politika eto Mahajanga, saingy tsy mbola niseho vahoaka. Mazava ny hevitry ny lehiben’ny faritra momba io. “Miankina amin’ny fitondrana ny haha kandidà ahy na tsia na eo aza ny fahavononana hanompoana ny tanindrazana, rehefa mahazo ny tsodranon’ny filoham-pirenena”, hoy ity mpanao gazety teo aloha ity.
Synèse R. (Iraka manokana Mahajanga)